शब्दकोश: 100 Lyrics, गुलजार र गीति भक्कानो
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, April 06, 2010
Chaitanya April 07, 2010
गीतहरु प्राय सुनेकै भए पनि गीतकार उही एउटै मान्छे भन्ने थाहा थिएन|बडो रमाइलो लाग्यो पढेर|धाईबाजीको मीटरबेगरको गीत पनि कम्ताको छैन|धेरै धेरै धन्यबाद यहाँलाई |
Dilip Acharya April 08, 2010
गुल्जारका गीतहरुको म पुरानै प्रशंसक हुँ भन्दा फरक पर्दैन होला ।
अन्तमा आएको तपाईको गीत पनि अब्ब्ल दर्जाकै लाग्यो मलाई। विशेष गरी:
मा गज्जबको शब्द संयोजन छ वाह!
Dhruba Panthi April 08, 2010
गीती पुस्तक पढ्दापढ्दै यस्तो मिठो गीत रचना गर्न पुग्नुभएछ, तपाईंलाई बधाई। मिटरको कुरा त आफूलाई पनि कसरी थाहा हुनु र:) तर पनि माथि दिलिप सरले उल्लेख गर्नुभएका पंक्ति भने बेजोडकै छन्।
Basanta April 08, 2010
पहिलेदेखिनै मन पराईने गीतहरु गुल्जारकै हुन् भन्ने कुरा मैले पनि पछि आएर जानेको हुँ। गुल्जारका बारेमा सचेत ढंगले बुझ्न थालेको गजलमा रस बसेपछि हो। गजल सुनेर मात्रै होईन, त्यसको 'कविता'लाई पढेर-गुनेर पनि चाख्नुपर्छ भन्ने सिकियो कतैबाट र गुल्जारका अक्षर-अक्षर खोतल्न थालियो भ्याएसम्म।
यो परिचयका निम्ति तपाईँलाई साधुवाद!
गुल्जारको जादूको शक्ति प्रत्यक्ष देख्ने मौका मिल्यो तपाईँको सुन्दर गीतबाट। अलि-अलि मिलाउँदा यो अब्बल गेयात्मकताको गीत बन्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन।